Izay rehetra tafiditra amin'ny fananganana toeram-pambolena rivotra | Fanavaozana maintso
Izay rehetra tafiditra amin'ny fananganana toeram-piompiana rivotra
Efa nahita ve ianao a eolico Park funcionando. Turbine rivotra ary ny lelany mihetsika sy miteraka angovo. Na izany aza, aorian'izany rehetra izany dia misy fandalinana tsara momba ny rivotra, ny toerana misy ny turbine rivotra, ny herinaratra ilaina, sns. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika tsikelikely ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fananganana toeram-pambolena rivotra.
Te hianatra ve izay rehetra ateraky ny famokarana herinaratra?
1 Fandrefesana ny rivotra
2 Fatra refy
3 Kajy ny fahombiazan'ny valan-javaboary
4 Dingana alohan'ny fananganana ny fiompiana rivotra
5 Singa fananganana
6 Inona avy ireo asa fikojakojana ananan'ny fiompiana rivotra?
Fandrefesana ny rivotra
Mazava fa miresaka isika herin'ny rivotra, ka ny fandinihana voalohany manandanja indrindra izay vita dia amin'ny rivotra. Ilaina ny fahalalana ny fitondrana rivotra izay mitsoka amin'ny faritra anaovana ny fiompiana rivotra. Tsy zava-dehibe fotsiny ny fahafantarana ny karazan-drivotra manjaka, fa koa ny hafainganana mifofofofo sy ny hatetika.
Ny fotoana ampiasaina handrefesana ny rivotra dia tsy mitovy amin'ny tanjon'ny tetikasa. Ny refy amin'ny ankapobeny dia mandre herintaona. Amin'izany no hialan'izy ireo amin'ny fisalasalana momba ny tsy fandrefesana ampahany amin'ny taona ary noho izany dia manana fahatokisana bebe kokoa amin'ny angona izy ireo.
Mandrefy ny rivotra mila ekipa voaofana ianao. Apetraka amin'ny haavo samy hafa izy hahafantarana masontsivana sasany misy amplitude lehibe kokoa. Ny toerana fatra matetika refesina dia ny tendrony, ny midrange ary ny haavon'ny hub. Amin'ireto teboka telo ireto, ny sandan'ny rivotra dia marina kokoa ary ilaina amin'ny fananganana toeram-piompiana rivotra. Vantany vao voaomana ny tilikambo fandrefesana sy ny andry, apetraka ny gauge. Matetika izy io dia ampiasaina handrefesana ireo miovaova toy ny fitaovana anemometre, hygrometers, vanes, thermometers ary barometers.
Tsy maintsy jerenao ny haben'ny fananan'ny fiompiana rivotra, arakaraka ny teti-bola azo. Mety ho hitantsika ny faritra midadasika misy fitondrana rivotra mety hanome fiverenana tsara any amin'ny valan-javaboary, saingy tsy manana loharanom-bola ampy hanatanterahana ny asa. Tena ilaina izany fantaro ny refy amin'ireo faritra kasaina fandaharam-potoana fanamboarana, fisehoana arakaraka ny velaran-tany, velaran-tany sy topografia, ary maodely mety hitranga amin'ny turbin-drivotra mety napetrakao.
Miorina amin'ireto masontsivana ireto dia mila mametraka ny toerana hametrahana ny masts isika. Ny consultant manokana dia tsy maintsy misy eo amin'ny fananganana toeram-piompiana rivotra. Izany dia satria zava-dehibe tokoa ny mamaritra tsara ny toerana misy ireo andry sy ny fametrahana azy ireo.
Ny fampiasam-bola amin'ny mast izay manampy antsika handrefy ny loharanon-drivotra ananantsika dia zava-dehibe amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa. Ho fanampin'izay, mila ireo fandrefesana ireo ianao mifanaraka amin'ny fitsipika sy ny fenitra misy manerantany.
Satria refesina mandritra ny taona ny angona, zava-dehibe ny hitazomana tsara ny refy. Na dia apetraka araka ny fenitra aza ny mast, dia mety misy karazana olana mila amboarina. Raha tsy voavaha haingana ny olana dia hanana fotoana isika amin'ny fandrefesana diso izay hitarika lesoka.
Kajy ny fahombiazan'ny valan-javaboary
Ny fikajiana raha hahomby ny fiompiana rivotra dia zava-dehibe tokoa. Noho izany, lafin-javatra maro no tsy maintsy dinihina. Ny iray amin'izy ireo dia ny fandrefesana marina ny loharanon-drivotra mandritra ny fampielezan-kevitra.
Vantany vao vita ny fampielezan-kevitra fandrefesana dia mahazo angon-drakitra mba hiasa. Azonao atao ny manombatombana ny fahefana ananan'ilay valan-javaboary, ny toetran'ny turbine rivotra, ny topografia an'ny tany, sns. Ny fizarana voaatsara kokoa dia azo atao ihany koa amin'ny angona azo atao mba hikajiana ny famokarana ny fiompiana rivotra. Amin'ireo angona ireo dia azonao atao ny mahalala ny zava-bita hanananao raha vantany vao vita ireo asa mifandraika amin'izany.
Ny fampisehoana kajy amin'ity dingana ity dia tsy mihevitra ny fatiantoka herinaratra mifandraika amin'ny fametrahana fanampiny. Mandritra ny fampiasana ny valan-javaboary, indraindray dia misy ny olana mampihena ny fampisehoana. Na izany aza, tsy azo vinavinaina izany. Tsy azo isaina hoe impiry ary impiry hisy ny olana izay mitarika amin'ny fihenan'ny fampisehoana.
Dingana alohan'ny fananganana ny fiompiana rivotra
Amin'ny sehatra alohan'ny fananganana ny toeram-piompiana rivotra, ilaina ny mampahafantatra tsara momba izany ny fepetra eo amin'ny tsena momba ny famatsiam-bola sy ny vidiny (CAPEX). Ohatra, ny asan'ny injeniera mila atsipy dia tsy maintsy manana fahatakarana bebe kokoa momba ilay tranonkala. Ho fanampin'izay, misy ny vahaolana teknika amin'ny resaka injeniera ary ny loza mety hitranga mifandraika amin'ny fisalasalana tsy maintsy dinihina. Ireo data rehetra ireo dia miseho amin'ny famatsiam-bola farany amin'ny fiompiana rivotra.
Raha te hahalala lalina ny mety ahombiazan'ny fiompiana rivotra, zava-dehibe ny fahalalana ny lisitry ny fiovan'ny toetr'andro. Anisan'ireo fiovana ireo no ahitantsika ny fepetra ara-jeolojika sy geoteknika, ny tontolo iainana, ny ara-dalàna ary ny faritany. Azo atao ihany koa ny mamakafaka ny fahazoana miditra amin'ny toeram-piompiana rivotra, na an-tanety na amin'ny seranan-tsambo, ary hahafantarana ny fetran'ny tambajotra.
Noho izany dia tsy maintsy atao ny manao ireo karazana asa fanatsarana sy fandrefesana rehetra ireo. Tsy mitovy ny manorina amin'ny tany mahazatra fa tsy amin'ny tranokala misy fihetsiketsehana matetika.
Rehefa manatanteraka ny fananganana ny valan-javaboary dia misy fahasamihafana tokony hodinihina arakaraka ny heriny. Ho fanampin'izany, miankina ihany koa amin'ny faritra honahona na be vato izy ireo ary ny haben'ny turbin-drivotra.
Ny asa voalohany notanterahina dia sivily (lampihazo, fototra ary lalana). Ity asa ity matetika dia maharitra eo anelanelan'ny 4 sy 12 volana. Avy eo ny fananganana hifandray amin'ny tamba-jotra dia manomboka. Ity ampahany ity dia matetika maharitra elaela miankina amin'ny fahasarotan'ny azy. Matetika izy ireo dia eo anelanelan'ny 6 sy 18 volana. Ary farany, rehefa manomboka vita ny asa sivily dia ampidirina ary tafangona ny turbin-drivotra. Arakaraka ny habeny sy ny haben'ny vala, eo anelanelan'ny 12 sy 24 volana.
Mba hahalalantsika hoe ohatrinona ny mpiasa no ilaintsika, tsy maintsy fantarintsika tsara ny haben'ny valan-javaboary. Ny iray misy turbine rivotra 30 olona 350 no afaka manangana azy. Raha manana turbine rivotra 5 fotsiny ianao dia olona 50 eo ho eo no milainao.
Inona avy ireo asa fikojakojana ananan'ny fiompiana rivotra?
Satria tsy an'ny turbin-drivotra fotsiny ny fiompiana rivotra, ilaina ny fikojakojana ny fametrahana manontolo. Ny asa fikojakojana sy ny vidiny mifandraika amin'izany dia miankina amin'ny haben'ny zaridaina sy ny endrik'ireo fotodrafitrasa. Ny kalitao avo kokoa amin'ny sehatra fananganana dia mampihena ny vidin'ny fikolokoloana.
Manana referansa, toeram-pambolena rivotra misy turbinina 30-50 eo ho eo Izy io dia afaka mitandrina olona 6 (turbine roa isaky ny rivotra), olona 2 ka hatramin'ny 6 hafa voatendry hanohana ny fikojakojana isan-taona, mpiandraikitra ankapobeny, ary olona iray na roa voatendry hiasa amin'ilay foibe mpamokatra.
Amin'ity fampahalalana ity dia antenaiko fa hianaranao izay rehetra ilainao momba ny fiompiana rivotra sy ny asa tanterahin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Izay rehetra tafiditra amin'ny fananganana toeram-piompiana rivotra
Dr. Luis Monzon dia hoy izy:
Andro tsara. Firy ny tany ilaina amin'ny turbine rivotra 100 MW?
Valiny tamin'i Dr.Lui Monzon
Darci dal nitafy dia hoy izy:
Manana fepetra aho, mila torohevitra sy fifandraisana aho hanohizana ny tetik'asa rivotra
Mamaly an'i Darci dal ponte
Famaritana, fampiasana ary fandrefesana ny herin'ny kaloria amin'ny entona
Angovo hafa tokony ho fantatrao